Dagaal ka dhacay Gobolka Bakool & faah faahin laga helayo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Dagaal ka dhacay Gobolka Bakool & faah faahin laga helayo
Dagaalka oo u dhaxeeyay Ciudamada dowladda Soomaaliya iyo Xubno katirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Xudur oo ah Xarunta Gobolka Bakool.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyah kadib markii Al-Shabaa ay weerareen Salshiga Ciidamada dowladda ee degmada Xudur, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dad ku sugan degmada Xudur ayaa Risaala u sheegeen in dagaalka oo aad u cuslaa uu muddo ku dhow saacad ka socday Salshiga Ciidamada dowladda, balse aysan sirasmi ah u xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ayaa dhankooda waxaa ay sheegeen inay iska dufaaceen weerarkii kaga yimid dbinaca Ururka Al-Shabaab, isla markaana dagaal kooban oo dhacay ay ku gaarsiiyeen qasaaro xoogan.
Degmada Xudur ee Xarunta Gobolka Bakool ayaa waxaa ay kamid tahau degmooyinka u go’doonsan Ururka, waxaana dadka ku nool ay wanahaan dhibaatooyin dhanka molosha ah.
Previous articleSomalia: On IDUAI 2021, SJS and SOMA call for media, journalists’ access to information amid increased pressure against media freedom
Next articleRW Rooble” Ikraan Tahliil kuwii dhibaateeyay Cadaaladda ayaan marsiin doonaa”